I-Huawei Mate 9, uhlalutyo: uphononongo kunye noluvo lokumkani omtsha wee-phablets | I-Androidsis
I-Huawei Mate 9, ngukumkani omtsha wentengiso ye-phablet
UAlfonso de Frutos | | Huawei, Reviews
Umgca we-Mate ukwazile ukufumana indawo enomdla yabasebenzisi abakuxabisayo ukugqitywa komgangatho wayo, isikrini esikhulu kunye nokuzimela okumangalisayo. Sele sikunikile ukubonakala kwethu kokuqala emva kokuvavanya ilungu elitsha kumnyhadala womenzi, Ngoku sikulethela ukugqibelela Uhlolo lweHuawei Mate 9, Ngaphandle kwamathandabuzo, eyona fowuni intle yenziwe ukuza kuthi ga ngoku sisigebenga saseAsia.
Kwaye ukuwa kwe-Samsung Galaxy Qaphela i-7 inike ithuba legolide kwabo bakhuphisana nabo ukuba bandise isabelo sabo sentengiso kwicandelo, lelo leepablets, elilawulwa ngokucacileyo lusapho lweSamsung Qaphela. Kwaye ukuba, iHuawei Mate 9 inamanani amaninzi okuba ngukumkani omtsha woluhlu.
1 I-Huawei Mate 9 ime ngokubonelela ngokugqitywa okumangalisayo kuyilo eligcina iDNA yomenzi
2 Iimpawu zobugcisa zeHuawei Mate 9
3 Isikrini esigcweleyo se-HD esikhanyayo ngokukhanya kwaso
4 Oyena mfundi ubalaseleyo weminwe kwimarike
5 I-EMUI 5.0, ujongano oluhle nolukhanyayo olungacothisi amava omsebenzisi
6 Ibhetri: I-Huawei Mate 9 iphinda itshayele abo ikhuphisana nabo ngokunikezela ngokusebenza okungazange kwenzeke ngaphambili kunye nokuzimela
7 Ikhamera ebonisa ubungqina benkqubo ezimbini yindlela yokuhamba
8 Igalari yeefoto ezithathwe ngekhamera yeHuawei Mate 9
9 Izigqibo zokugqibela
10 Uluvo lomhleli
11 Igalari yemifanekiso yeHuawei Mate 9
I-Huawei Mate 9 ime ngokubonelela ngokugqitywa okumangalisayo kuyilo eligcina iDNA yomenzi
Into yokuqala oyilindeleyo xa usebenzisa ifowuni ye-5.9-intshi kukuba i-terminal yicolossus ngokobungakanani. Kwaye apha kufika isimanga sokuqala ukuvavanya ngokucokisekileyo i-Huawei Mate 9. Ilungu lakutshanje losapho lwe-phablet yomenzi waseAsia Inemilinganiselo kakhulu.
Ngamanyathelo e X x 156,9 78,9 7.9 mm Ndingatsho ukuba iHuawei Mate 9 sisiphelo esisesandleni kwaye sikhululekile ukusisebenzisa ngaphandle kokudibana kwescreen sayo. Ifowuni iziva ilungile ngokwenene esandleni, Ukubonelela ngokubamba kakuhle ngaphandle kokugqitywa kwesinyithi Ngayo yakhiwe ngayo kwaye yayo 190 iigram zobunzima yenza i-terminal ikhanyise ngaphandle kwepaneli ye-intshi ezi-5.9.
Uninzi lokufaneleka kobungakanani bayo buya ngaphambili kwifowuni, isetyenziswe kakuhle. Izakhelo ezisecaleni azibonakali ngaphambili, ngakumbi kwimodeli kaMocha Brown. Ukongeza, umvelisi usebenzisa isakhelo esimnyama esimnyama semilimitha enye ejikeleze yonke ikhusi inika umbono omkhulu wokusetyenziswa ngaphambili. Nangona kukho abasebenzisi abangasithandiyo esi sikhokelo kakhulu, andinangxaki kwaphela. Ewe kunjalo, kwimodeli endiyisebenzisileyo, ngaphambili inombala omhlophe, isiphumo besiphawuleka ngakumbi.
Zombini izakhelo ezingaphezulu nezisezantsi azikho ububanzi ngokugqithileyo Phezulu kulapho uninzi lweenzwa zibekwe ukongeza kwikhamera yangaphambili, ngelixa emazantsi siza kuyifumana ilogo yophawu. Kwaye amaqhosha asebenza kakuhle? IHuawei iyaqhubeka nokubheja kumaqhosha kwiscreen, umbono ophumelele kakhulu kwimbono yam.
Kwicala lasekhohlo sifumana indawo yokufaka amakhadi amabini enanoSIM, okanye ikhadi le-nanoSIM kunye nekhadi le-SD elincinci elikuvumela ukuba wandise amandla esixhobo. Inkqubo esetyenziswayo esetyenzisiweyo eye yangumlinganiso weHuawei. Ukukhetha ngobulumko.
Ukuhamba usiya kwicala lasekhohlo, kulapho izitshixo zolawulo lwevolumu zibekwe khona ukongeza kwiqhosha lamandla leHuawei Mate 9. Omabini la maqhosha banikela umnqweno omnandi kakhulu, kunye noburhabaxa beempawu kwiqhosha lamandla ukwahlulahlula kumaqhosha olawulo lwevolumu, ukongeza ekubeni nokubetha ngokugqibeleleyo kunye nangaphezulu koxinzelelo olwaneleyo. Ngokwam, ndiqhele ukuba nawo omathathu amaqhosha akwicala elinye, ngoko ke andinangxaki koku, kulula ukuqheleka phofu.
Ngokungafaniyo neHuawei P9, I-phablet entsha yomenzi ifaka i-headphone jack ngaphezulu, Ukongeza kwi-infrared port eya kusenza sikwazi ukulawula izixhobo ezahlukeneyo kwifowuni. Ngokubhekisele ezantsi, siza kubona iigrilles ezimbini zokuphuma kwesithethi kunye nesihlanganisi se-USB C.
Umva weHuawei Mate 9 unikezela uyilo olunomtsalane kunye nolubalaseleyo ngobukho be ikhamera ezimbini kunye neethoni ezimbini ze-flash kunye nenzwa yeminwe, kunye negama lophawu emazantsi.
Un Ifowuni entle egcina imigca yoyilo ebonwe kwiimodeli zangaphambili kwaye iyabonakala xa ithelekiswa nabantu abakhuphisana nayo ngenxa yelo candelo lingemva kunye nolungelelwaniso lwekhamera ezimbini, njengoko uza kubona kamva, zibonelela ngokusebenza okumangalisayo.
Ndingakufumana kodwa? ewe inyani yokuba iHuawei Mate 9 ayimelani nothuli namanzi. Ndicinga ukuba ekuphela kwento engekhoyo kwiitheminali zomenzi waseAsia sisiqinisekiso se-IP esihambelanayo esikuvumela ukuba ungene kwifowuni yakho ngaphandle kweengxaki. Ndiyathemba ukuba isizukulwana esilandelayo sinalo olu khuselo.
Iimpawu zobugcisa zeHuawei Mate 9
Umzekelo Umlingani 9
Inkqubo yokusebenza I-Android 7 Nougat phantsi komaleko we-EMUI 5.0
Isikrini I-5'9 "IPS enobuchwepheshe be-2.5D kunye nesisombululo esipheleleyo se-HD 1920 x 1080 esifikelela kwi-373 dpi
Inkqubo I-HiSilicon Kirin 960 i-core-core (ezine zeCortex-A 73 cores kwi-2.4 GHz kunye ne-Cortex-A53 cores kwi-1.8 GHz)
GPU IMali G71 MP8
i-ram 4 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi I-64 GB iyandiswa ngeMicrosoftSD ukuya kuthi ga kwi-256 GB
Ikhamera esemva Inkqubo ye-20 MPX + ye-12 MPX ene-2.2 yokugxila ekugxilwe kuyo / i-autofocus / ukuzinza komfanekiso ozinzileyo / ukufunyanwa kobuso / i-panorama / i-HDR / ithoni emibini ye-flash flash / i-Geolocation / ukurekhodwa kwevidiyo kumgangatho we-4K
Ikhamera yangaphambili I-8 MPX ene-focal aperture 1.9 / ividiyo kwi-1080p
Conectividad I-DualSIM iWi-Fi 802.11 a / b / g / n / ibhendi emibini / iWi-Fi ngqo / indawo enegunya / iBluetooth 4.0 / A-GPS / GLONASS / BDS / GSM 850/900/1800/1900; Iibhanti ze-3G (HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100) 4G band band 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 4 (1700/2100) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 9 (1800) / 12 (700) / 17 (700) / 18 (800) / 19 (800) / 20 (800) / 26 (850) / 28 (700) / 29 (700) / 38 (2600) / 39 (1900) / 40 (2300) / 41 (2500)
Ezinye izinto isivamvo somnwe weminwe / i-accelerometer / ukugqiba kwesinyithi
Ibhetri I-4000 mAh ayinakususwa
Ubukhulu X x 156.9 78.9 7.9 mm
U bunzima I-190 gram
Ixabiso 699 euro
Njengoko kulindelekile kwiqela lezi mpawu, I-Huawei Mate 9 ine-Hardware yoqwalaselo olunamandla. IHuawei iyaqhubeka nokubheja kwizisombululo zayo zokunika ubomi kumakrele ayo okuqala kunye neprosesa IHiSilicon Kirin 960 eYeyona SoC inamandla yenziwe yinkampani namhlanje.
Ndithetha nge-octa engundoqo ye-CPU eyenziwe zii-Cortex A73 cores ezifikelela kwisantya seewotshi ze-2.4 GHz, ukongeza kwezinye ii-Cortes A53 cores kwi-1.8 GHz .Koku kufuneka sidibanise Iprosesa ye-i6 elawula ukulawula iimvakalelo ezahlukeneyo zesixhobo, nokuba sikwi-suspension.
Iprosesa yeziqinisekiso kwaye inamandla aphezulu kakhulu kunaye nawuphi na umsebenzisi oza kuyidinga ngaloo nto ayizukuba nexhala. Ukusuka eHuawei bathatha ukuba I-Kirin 960 yi-15% enamandla ngakumbi kwaye i-18% isebenza ngakumbi kuneenguqulelo zangaphambili Kwaye, emva kokuyivavanya kangangenyanga, ndiyakuqinisekisa ukuba injengale: i-terminal ihambisa yonke into esiyibonayo kwiscreen sayo ngesantya esiphezulu, ngaphandle kokuqaphela ilitha okanye ukuyeka.
Ukuba iHuawei ayibhejisi kwiiprosesa ezivela kwiMediaTek, iQualcomm okanye iSamsung ukwenza iiterminal zayo zibethe, kungenxa yesizathu esilula kakhulu: ayizifuni. Umenzi ukwazile ukufezekisa umgangatho ngokwenziwa kweeprosesa ezingenanto yakubamonela abo bakhuphisana nabo.
Kwaye ukuba sithathela ingqalelo eli gunya ayikonakalisi ukuzimela kwaphela ye-Huawei Mate 9 ethi, njengoko uza kubona kamva, iseyenye yeefowuni eziza kuba ngumthengisi othengisa kakhulu.
Ngaphandle koko, yakhe IMali G71 MP8 GPU kunye ne-4 GB ye-RAM Banikezela ngokutsiba kumgangatho kwicandelo lemizobo, ukubonelela ngokusebenza ngokugqwesileyo kunye nemidlalo ebaluleke kakhulu. Kwaye xa ujonga ukuhambelana kwayo neVulkan, kuyacaca ukuba, ukuba ufuna ukonwabela eyona midlalo ilungileyo, iHuawei Mate 9 yeyona ilungileyo. Okungakumbi ukuba sithathela ingqalelo isikrini sayo se-intshi eyi-5.9.
Isikrini esigcweleyo se-HD esikhanyayo ngokukhanya kwaso
IHuawei Mate 9 inescreen esenziwe nge Iphaneli ye-IPS ye-5.9-intshi, kunye neglasi ye-2.5D uyikhusela kumaqhuma nakukuwa. Isikrini silungelelaniswe kakuhle, sibonelela ngokugqibeleleyo kunye nemibala eqaqambileyo nebukhali, nangona sibulela ngokudityaniswa kwesoftware okuhle kakhulu esinokuthi sihlengahlengise iqondo lobushushu bombala ngendlela esithanda ngayo.
Los ii-angles zokubukela zilungile kwaye ulawulo lokuqaqamba lubalasele. Isiphelo esiguqukayo ngexesha lokwenyani ukukhanya kwescreen ngokokukhanya kokuma ngendlela ethambileyo, ukongeza kwimowudi yokukhusela iliso efanelekileyo yokufunda umxholo weeyure ngaphandle kokucinezela amehlo akho.
Ngelixa kuyinyani ukuba ndingathanda i-Huawei Mate 9 ukunyusa ipaneli ye-2K, ndiyayithatha loo nto umenzi ulungile ngokubheja kwisisombululo esisezantsi ukuze aqhubeke nokubonelela ngokuzimela okuphawuleka ngokwenene.
Ndikwazile ukuvavanya iitheminali ngezikrini ze-2K kwaye umahluko kwinqanaba lokubonwayo awuqapheleki, ngaphandle kwaxa ufunda umbhalo omninzi, apho uphuculo oluncinci lubonakalayo, kodwa ndihlala ndisithi olu hlobo lwepaneli luluncedo kuphela ukuthatha Uncedo lwetekhnoloji yeVR kwaye kude kube kufika iipaneli zokuqala ze-4K zeefowuni eziphathwayo, apho iipikseli ziya kuthi ekugqibeleni zitshabalale xa wonwabele umxholo okwenyani, ndicinga ukuba isikrini esigcweleyo se-HD sanele ngaphezulu.
Oyena mfundi ubalaseleyo weminwe kwimarike
Iimvakalelo zebhayometri kwizixhobo zeHuawei zezona zibalaseleyo. Elula njengaleyo. Kuzo zonke iifowuni endizizamile, ngaphandle kwamathandabuzo ndikhetha izisombululo zalo menzi. Kwaye kwimeko ye-Huawei Mate 9 siyifumana umfundi weminwe osebenza njengekhubalo ukuqaphela ukunyathela kwethu okwangoku ngalo naliphi na icala.
Ekuqaleni umfundi uqhela iprofayile yethu, ngalo lonke ixesha ephucula isantya xa kufikwa ekuqondeni iminwe yethu, kodwa inyani kukuba ukusukela kumzuzu wokuqala isebenze kwangoko kwaye khange ndibone kuphuculwa kuba kungenakwenzeka ukuphucula amandla abo okuphendula.
Ukukunika umbono, ngeli xesha lenyanga uninzi lwamaxesha apho ndenze khona isikrini ndisebenzisa isifundi somnwe kwaye Khange isilele nakanye. Ngokwam, ndiyayithanda indawo yayo ngasemva, nangona ndiqonda ukuba abanye abasebenzisi banokukhetha ukuba ibekwe ngaphambili ukuze bakwazi ukuvula isikrini sefowuni ngelixa ungqiyame ngetafile, kodwa ndiye ndayiqhela ukuyikhetha uyivule kwaye kubonakala kum ukuba isikhundla sakhe sigqibelele.
I-EMUI 5.0, ujongano oluhle nolukhanyayo olungacothisi amava omsebenzisi
Andizithandi izaleko zesiko. I-Android emsulwa yeyona ndlela ilungileyo kwaye emva koko abasebenzisi baya kufaka isiqalisi ukuba bafuna njalo. Kodwa kufuneka nditsho ukuba iinguqulelo zamvanje ze-EMUI zindithandile kwaye nazo I-EMUI 5.0 iHuawei ikwazile ukufikelela kumgangatho ogqibeleleyo kunye namava omsebenzisi.
Ukuqala umaleko ngu isekwe kwi-Android 7.0 Nougat, Inguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza kaGoogle, into ekufuneka ixatyisiwe. Utshintsho xa kuthelekiswa neenguqulelo ezidlulileyo lunomdla kuba, umzekelo, sinako ukwenza idrowa yesicelo, ukhetho olufanelekileyo kwabo basebenzisi abangakhange basebenzise inkqubo esekwe kwidesktop.
Uninzi lwezinto zokusebenza kunye neempawu kukucofa kathathu kude Kulula kakhulu kwaye kulula ukufikelela kulo naliphi na icandelo lesiphelo. Gqabaza ulawulo lwayo lwe-multitasking oluthi, ngokuchukumisa kancinci kwiqhosha elihambelanayo, sikwazi ukufikelela kwinkqubo «yamakhadi» esinokuthi sibone ukuba zeziphi izicelo esivulekileyo kuzo.
Njengeemodeli zangaphambili, iHuawei Mate 9 inokukhetha yenza izijekulo ezahlukeneyo ngamaqhina akho ukuthatha ii-skrini okanye ukwenza ukusebenza kwescreen okuza kusivumela ukuba sisebenzise usetyenziso olunye ngaxeshanye kwiscreen esinye.
Gqamisa loo keyboard Swiftkey Kuza umgangatho kwisiphelo sendlela ukubhala ngale Huawei Mate 9 luvuyo lokwenene. Kwaye kugxininiswa ngokukodwa kwimowudi "yamawele", eyona nto inomdla kwi-EMUI 5.0 kwaye esivumela ukuba sisebenzise inkonzo efanayo, enje ngeWhatsApp okanye iFacebook, eneeprofayile ezimbini. Ilungele abo bantu banenombolo yobuqu nenombolo yobungcali kwaye abangafuni ukuphatha iifowuni ezimbini ngaxeshanye.
Ujongano olutsha lukaHuawei lubonisa iqonga lobukrelekrele bokuzenzela efunda ngokusetyenziswa kwesixhobo, ukuziqhelanisa neemfuno zethu kunye nokwenza umsebenzi ongcono.
Ezi algorithms, ezingadingi kunxibelelwano lwe-intanethi ukusebenza, ukuziqhelanisa nokusetyenziswa kwethu kwemihla ngemihla kunye nokwenza usetyenziso olisebenzisa rhoqo libaleka ngokukhawuleza. Ngaba iyasebenza? Andinalwazi, njengoko ndingakhange ndibone ukuphucuka kokusebenza, kodwa kuba ukusebenza kugqibelele ngalo lonke ixesha, ndingacinga ukuba eli nqaku lilifanele ngokwenene.
Kodwa ayizizo zonke iindaba ezilungileyo. Abavelisi baseTshayina bayathanda ukufaka bloatware kwaye ngelishwa iHuawei ayikho ngaphandle. I-Facebook, ukubhukisha okanye uluhlu lwemidlalo lufakelwe kwangaphambili kwifowuni kwaye, nangona uninzi lwezi zicelo zenkunkuma zinokucinywa, ndiyayicaphukisa into yokuba izicelo ziza nokuba andizicelanga. Kodwa yinto esiyiqhelileyo, ngelishwa, uninzi lwabenzi kunye ubuncinci ayiphazamisi kumava obalaseleyo omsebenzisi anikezelwa yi-EMUI 5.0
Ibhetri: I-Huawei Mate 9 iphinda itshayele abo ikhuphisana nabo ngokunikezela ngokusebenza okungazange kwenzeke ngaphambili kunye nokuzimela
La inkululeko yenye yezona zinto zibalulekileyo xa ukhetha itheminali enescreen esikhulu kwaye kwimeko yeMate line ibisoloko ingomnye wamandla ayo. Kwaye kwimeko ye-Huawei Mate 9, kufuneka nditsho kugqithisiwe kumenzi-mveliso.
Umlingani 9 une I-4.000 mAh ibhetri oko kuthatha ithuba lokuzimela kwayo. Ukukunika umbono, ukunika ukusetyenziswa kwesiqhelo, ngeyure yakho yemihla ngemihla ye-Spotify, ukukhangela i-intanethi, ukufunda ii-imeyile, ukusebenzisa uthungelwano ekuhlaleni kunye nokudlala kangangesiqingatha seyure, i-terminal indinyamezele iintsuku ezimbini. Ngosuku lwesibini sele efika ekhaya ngentsimbi yesi-20: 00 ngokuhlwa ngokungxama, kodwa ukusebenza kuyamangalisa.
Ukuba siyayicinezela ikhamera yakho ukuba ithathe iifoto kunye nevidiyo okanye idlale imidlalo enzima, ibhetri iya kuphuma ngokukhawuleza, kodwa sele ndikuxelele ukuba kuqhelekile akunakwenzeka ukuba ifowuni ilahle ngaphantsi kwe-40% ngosuku olunye.
Kule nto kufuneka kongezwe indlela yokutshaja ekhawulezayo efika kumgangatho kwi-Huawei Mate 9 esivumela ukuba sibe ne-30% yebhetri ehlawulisiweyo kwimizuzu engama-50. Iintsuku zokuqala endandivavanya ngazo ifowuni kwathatha ixesha elide, ukufikelela kwi-60% kwimizuzu engama-50, kodwa emva kweentlawulo ezimbalwa kuye kwacaca ukuba uHuawei ebengalelanga malunga noku, kulungile, ukutshaja ngokukhawuleza kuye kwaba ngokukhawuleza kunokuba kusitsho umenzi, othe wandothusa.
Kwaye oko Ndifumene iipesenti ezingama-55 zebhetri kwimizuzu engama-30 Kwaye, njengoko benditshilo ngaphambili, ngokuzimela siqinisekisiwe ngemini yokusetyenziswa. Ayothusi into yokuba, intlawulo iyancipha njengoko ixesha lihamba, kodwa eyokuqala imizuzu engama-30 ukuya kwengama-40 kuxa intlawulo yenziwe ngokukhawuleza.
Ngokweemvavanyo zam, Intlawulo epheleleyo ithatha ngaphantsi kweeyure ezimbini, eziphakathi kweyure kunye nemizuzu engamashumi amabini kunye neyure kunye nemizuzu engamashumi amane. Ibhetri yokugqibela ye-15% yeyona ithatha ixesha elide ukugcwalisa, kodwa sele ndikuxelele ukuba isantya sayo siyothusa.
Un Inkqubo yokutshaja ngokukhawuleza egqitha kwi-Qualcomm Quick Charge 2.0 eyaziwayo okanye iMediaTek Pump Express ebesikwazi ukuvavanya ngayo iNomu S20. Ewe kunjalo, kuya kufuneka usebenzise itshaja eza kunye nesiphelo kwaye inkulu kancinci kuneetshaja ezihlala zibonelelwa nguHuawei kwizixhobo zayo.
Yitsho ukuba i-Huawei Mate 9 ayinakho ukutshaja ngaphandle kwamacingo, nangona iyinto esiqhele ukuyisebenzisa kunye neetheminali ezinikezela ngomzimba owenziwe ngealuminium kwinto endiyithatha njengendawo engendawo.
Kwaye okokugqibela ndifuna ukuphawula ngeenkcukacha endizithandayo. Kwaye kunjalo Kwibhokisi ye-Mate 9 kuza i-USB encinci kwi-USB Type C iadaptha, Iluncedo kakhulu xa usiya endlwini yomntu kwaye abanayo intambo ehambelana nefowuni yakho.
Ikhamera ebonisa ubungqina benkqubo ezimbini yindlela yokuhamba
Icandelo lekhamera lelinye lawona manqaku abalulekileyo kwi-Huawei Mate 9. Ukuqhubeka nokubheja kwi inkqubo lens ezimbini Icacisa injongo yomenzi ukomeleza ubudlelwane bayo kunye Leica. Kwaye iziphumo ezizuziweyo bezintle ngokwenene.
Ukuqala, i-Mate 9 ine-sensor yokuqala enesisombululo see-megapixels ezingama-20 kunye nendawo ekugxilwe kuyo engu-f 2.2 eqokelela ulwazi lwe-monochrome (ngombala omnyama nomhlophe). Kwelinye icala sifumana inzwa yesibini ye-12 megapixel ene-focal aperture efanayo nehambisa imifanekiso yemibala.
Zombini iilensi ziyimodeli Isishwankathelo sikaLeica-H 1: 2.2 / 27 esele siyibonile kwiHuawei P9 kunye neP9 Plus. Iziphumo zolu dibaniso zenza ukuba imifanekiso ifakwe ngombala okanye emnyama namhlophe ifikelele kwii-megapixels ezingama-20. Icebo lilele ekusetyenzisweni kwemifanekiso njengoko iMate 9 ithatha imifanekiso efakwe kumbala nakwimowudi ye-monochrome yokuguqula imibala yokwenza umfanekiso wokwenene ongu-20 megapixel.
Ugxininiso olukhethekileyo kwinto emangalisayo isiphumo bokeh Oku kuyaphunyezwa ngeHuawei Mate 9 kwaye yenziwe yasebenza ngeparameter eyandisiweyo yokuvula kwifowuni yekhamera yeefowuni. Iifoto ezifakwe ngale ndlela ziyamangalisa kuba, yakuba nje ithathiwe, sinako ukwahlula ubunzulu bentsimi yefoto enkosi kwisoftware yayo yokuqhubekeka.
Kwaye isoftware inceda kakhulu kule nkalo. Ukusetyenziswa kwekhamera yeHuawei Mate 9 kunenani elikhulu lokucoca kunye neemowudi eya kuvuyisa abathandi bokufota. Ngokukodwa imo ye-monochrome yokuthatha iifoto ezimnyama kunye ezimhlophe ezimangalisayo. Kwaye asinakulibala imowudi yobuchwephesha eya kukuvumela ukuba utshintshe ngesandla iiparameter ezahlukeneyo zekhamera, ezinje ngokujolisa okanye ibhalansi emhlophe, esiba sisixhobo esifunekayo kwiingcali kwicandelo lokufota. Ewe qiniseka ukuba unako gcina imifanekiso kwifomathi yeRAW.
Khankanya ukuba Ukudityaniswa kwazo zombini izivamvo kuvumela ukwenza i-hybrid 2x zoom kunye nedijithali ebonelela ngokusebenza okwamkelekileyo, ngaphandle kokufikelela kwinqanaba lokusondeza kokubonakalayo kodwa, ndiyakuqinisekisa, iyakukugcina kwiingxaki ezingaphezu kwesinye.
Ukutsho oko Isantya esigxile kwikhamera ye-Mate 9 silungile, Ukubonelela ngokubamba ngokukhawuleza okukhulu kunye nomgangatho. Emva kwexesha ndiza kukushiya uthotho lweefoto ezithathwe kunye nefowuni ukuze ubone ukuba kunokwenzeka.
Los imibala ibonakala ibukhali kakhulu kwaye icacile, ngakumbi kwiindawo ezinokukhanya okuhle, nangona indlela yayo yokuziphatha kwiifoto zasebusuku indothusile. Ndifuna ukugxininisa ukuba izinto ezibanjiweyo ezenziwe ngeekhamera zeMate 9 zibonelela ngokwenyani ngendlela ethembekileyo.
Ithetha ntoni le nto? Ukuba asizukuyibona imifanekiso inemibala njengakwezinye iifowuni eziphezulu ezine-HDR evuselelwe kangangoko ukuba inikeze imibala eqaqambileyo. Ngokwam ndiluthanda ngakumbi olu khetho, kwaye ukuba ndifuna ukunyanga umfanekiso ndiza kusebenzisa inani elikhulu lokucoca ulwelo ukubamba ukubetha okuthe kratya kwizinto ezibanjiweyo.
Ndisacinga ukuba ikhamera ye-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge, okanye ikhamera enomtsalane ye-LG G5, isenotshi apha ngasentla, kodwa Izinto ezifunyenwe kunye neHuawei Mate 9 ziyamangalisa kwaye kungekudala okanye kamva umenzi uya kugqibela ngokubamba abo bakhuphisana nabo, okanye nangaphezulu kwazo. Kwaye inyani yokuba nakho ukudlala ngesiphumo se-bokeh inika inqaku elinomdla kakhulu. Ungayichazanga eyokuba ekugqibeleni siya kuba nakho ukurekhoda kwifomathi ye-4K kwizakhelo ezingama-30 ngomzuzwana.
La Ikhamera yangaphambili, ene-f / 1.9 Inentsebenzo elungileyo, iziphatha kakuhle kwaye inikezela ngemifanekiso emihle kakhulu ngenxa yeelensi zayo ezi-8 zeemegapixel, iba lilungu elingenakuphikiswa kubathandi beeselfie.
Igalari yeefoto ezithathwe ngekhamera yeHuawei Mate 9
Huawei Ibe ngumvelisi wesithathu ngobukhulu emhlabeni ngokokufaneleka kwawo. Isigebenga saseAsia sikwazile ukususa lo mfanekiso we "Chinese brand fowuni ebiza ixabiso eliphantsi" ukunyuka njengomgangatho kwicandelo elinika izisombululo ezingenanto yakwenza nomona kumagama amakhulu anjengeSamsung okanye iApple.
Sele naye IHuawei P8 Lite, Kunye nephulo lokuthengisa elinomdla, umenzi ucebise ngeenjongo zalo. Kwaye emva kwe IHuawei P9 ethengisa kakhulu, esele idlulile kwiiyunithi ezizizigidi ezili-9 ezithengisiweyo, uHuawei unkqonkqoza etafileni ukukukhumbuza ukuba ilapha ukuhlala.
Phambi kokuba ndiphawule ukuba oku IHuawei Mate 9 yeyona fowuni ibalaseleyo yenziwe ukuza kuthi ga ngoku nguHuawei kwaye umsebenzi owenziweyo ulungile. Isixhobo esineepremiyamu ezigqityiweyo, ezineempawu ezisincomayo phezulu kwicandelo, sinika intsebenzo enomtsalane kunye neempawu, ezinjengekhamera yangemva kabini okanye ukuzimela okwahlula okhuphisana nabo.I-Huawei Mate 9 ifikelela kwintengiso Ixabiso lama-euro angama-699, elithathela ingqalelo iimpawu zalo, libonakala lisengqiqweni kum.
Kukho inkosi entsha kwintengiso ye-phablet emva kokuwa kweGlass Qaphela 7. Andazi ukuba usapho lweNqaku luza kubuyela kwimarike, ndiyathemba kwaye ndiqinisekile ukuba umenzi waseKorea akazukuncama ngokulula, kodwa inembangi elukhuni kakhulu, kuba ukuba le Huawei Mate 9 Ishiye incasa emnandi emlonyeni wam, ndiqinisekile ukuba sisiqalo nje esi yemfazwe enomdla yokuthweswa isithsaba somnini wentengiso ye-phablet eya kuthi izuze kakhulu umsebenzisi wokugqibela.
Uphengululo lwe: UAlfonso de Frutos
I-64GB yokwanda komthamo
Ukuzimela okungazange kubonwe ngaphambili
Ixabiso elinomdla kakhulu lemali elijonga izibonelelo zayo
Awunayo iRadio FM
Ayikwazi ukumelana nothuli namanzi
Igalari yemifanekiso yeHuawei Mate 9
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » I-Huawei Mate 9, ngukumkani omtsha wentengiso ye-phablet
I-SwiftKey ibeka yonke imixholo ehlawulwayo simahla
INokia D1C yayiza kufika kunyaka ozayo ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo